WhatsApp ကို + 86-13511523530
Xinmin Evening News (သတင်းထောက် Qiu Yingqiong) မကြာသေးမီက Philips Ultrasound (Shanghai) Co. , Ltd. ၏မှတ်ပုံတင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမန်နေဂျာ Wei Kai သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ th ...ဆက်ဖတ်ရန် »
တစ်ရှူးကတ်ကြေးနှင့် Suturing Scissors အကြားခြားနားချက်
post အချိန်: မတ်လ -23-2021
တစ်ရှူးကတ်ကြေးများနှင့်ချုပ်ခြင်းကတ်ကြေးများအကြားခြားနားချက်တစ်ရှူးကတ်ကြေးများနှင့်ချုပ်ခြင်းကတ်ကြေးများအကြားခြားနားချက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရသည် - ၁။ တစ်ရှူးကတ်ကြေးများကိုလူ၏တစ်ရှူးများကိုဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ဆက်ဖတ်ရန် »
Microsurgery တူရိယာများကော။ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်ရှိတစ်သျှူးများအားအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်အတွက်ဆရာဝန်များအတွက်သင့်တော်သောအထူးချောသောကိရိယာများကိုခွဲစိတ်ခြင်း။ အများအားဖြင့်သုံးသော microsurgery တူရိယာများမှာ ၁။ Microsurgery forceps သည်အမြင့်ဆုံးသော ...ဆက်ဖတ်ရန် »
မျက်စိရောဂါကိရိယာများကိုကိုင်တွယ်။ မျက်လုံးကိရိယာများအားလုံးသည်အထူးသဖြင့်ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကတ်ကြေးလေးများသည်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ ထိတွေ့မှုမရသင့်ပါ။ ကတ်ကြေးများ၊ အပ်ကိုင်ဆောင်သူများနှင့်ချောသော forceps အားလုံးသည်သူတို့၏အကြံဥာဏ်များကိုကာကွယ်ထားရန်လိုအပ်သည်ကာကွယ်သူများသည်ဓါးတစ်ချောင်းလုံးကိုဖုံးအုပ်ရမည်သို့မဟုတ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်တရုတ်၏ဆေးကုသမှုလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပြောင်းလဲမှု ၁၀ ​​ခု!
post အချိန်: မတ်လ -13-2021
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်တရုတ်၏ဆေးကုသမှုလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပြောင်းလဲမှု ၁၀ ​​ခု! ၁။ ကျန်းမာရေးအာမခံသည် ၂.၀ ခေတ်သို့ ၀ င်ရောက်သည်။ ၁.၀ ဆေးအာမခံသည်နှစ် ၅၀၀၀ အတွင်းအဓိကအားဖြင့်ပထမကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအာမခံဖြစ်သည်။ဆက်ဖတ်ရန် »
Plastic Surgery ဆိုတာဘာလဲ။
ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်ခြင်းအကြောင်းပလတ်စတစ်ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုသည်မှာလူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုပြင်ခြင်း၊ ၎င်းကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည် - ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းခွဲစိတ်ခြင်း။ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းခွဲစိတ်ကုသမှုတွင် craniofacial ခွဲစိတ်ခြင်း၊ လက်ဖြင့်ခွဲစိတ်ခြင်း၊ဆက်ဖတ်ရန် »
တရုတ်နိုင်ငံရှိဆေးပစ္စည်းကိရိယာများမှတ်ပုံတင်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်အကြောင်း CMDE မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်အတည်ပြုထားသောအိမ်သုံး III၊ တင်သွင်းသောအတန်းအစား ၂ နှင့်အဆင့် ၃ ဆေးပစ္စည်းများ၏သတင်းအချက်အလက် ၂၀၂၀ တွင်နိုင်ငံတော်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုမှဆေးဝါးထုတ်ကုန် ၁၅၅၇ ခုအားလက်ခံရရှိသည်။ ။ဆက်ဖတ်ရန် »
post အချိန်: မတ်လ -02-2021
အဓိကခွဲစိတ်ကုသသောကတ်ကြေးအမျိုးအစားခွဲခြင်းနည်းလမ်းများအရခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခြင်းကိုအမျိုးအစားများစွာခွဲခြားနိုင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုသည့်နည်းတူ၎င်းတွင် microsurgical sicssors, မျက်စိအထူးကုဆေးကုသမှု၊ တစ်ရှူးကတ်ကြေးများ၊ ကပ်ထားသည့်ကတ်ကြေးများစသည်တို့ပါဝင်သည်။ အတွင်း ...ဆက်ဖတ်ရန် »
များသောအားဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတွင်ခွဲစိတ်ကိရိယာများ၊ ကတ်ကြေးများ၊ တပ်ဆိုင်းများ၊ အပ်ကိုင်ဆောင်သူများ၊ ချိတ်များစသည်တို့ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာကိရိယာများကို I Class ဆေးပစ္စည်းအဖြစ်အမြဲဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်အမည်များ၏အမည်နှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းသည်သမိုင်းကြောင်းရှည်ခဲ့သည်။ ကတည်းကဆက်ဖတ်ရန် »
post အချိန်: ဇန်နဝါရီ -23-2021
သာမန်မျက်စိစစ်ဆေးမှုများတွင်အဘယ်အရာပါဝင်သနည်း။ မျက်စိအထူးကုပညာ၏ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။ ရန်ပုံငွေ၏မျက်စိကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အူအတွင်းအာရုံအတွင်းဖိအားကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အူအတွင်းရှိသွေးလွှတ်ကြောအတွင်းရှိသွေးလှည့်ပတ်မှုရှိသလား၊ မျက်ကြည်လွှာတွင်ရှိသောအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်စစ်ဆေးခြင်း၊ဆက်ဖတ်ရန် »
post အချိန်: ဇန်နဝါရီ -11-2021
ခွဲစိတ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးသောသင့်လျော်သောခွဲစိတ်ကုသမှုကိရိယာများကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။ ရက်စွဲ - ၂၀၂၁-၁၁-၁၁ ဆေးရုံတစ်ခုသည်ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာကိရိယာများကိုရွေးချယ်သောအခါ၎င်းတို့သည်အဘယ်အရေးကြီးသောအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သနည်း။ အကောင်းဆုံးသင့်တော်သူများကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။ဆက်ဖတ်ရန် »
ဟန်ဇူးမြို့တွင် Hongyu ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရိုးအထူးကုခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်များညီလာခံကျင်းပခဲ့သည်
post အချိန်: အောက်တိုဘာ -26-2020
၂၀၂၀-၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ Hangzhou မြို့တွင် Hongyu ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရိုးခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်များတက်ရောက်သည့်ညီလာခံကိုကျင်းပခဲ့သည်။ အရေးကြီးသောနှင့်ကျော်ကြားသောပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်ခြင်းဆိုင်ရာညီလာခံကို ၂၀၂၀ မှ ၂၄ ရက်ထိ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ Hangzhou၊ HongMedical ဥက္ကPresident္ဌ Mr.Chen နှင့်မန်နေဂျာသည်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ပြီး ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အီးမေးလ်ကိုချန်လှပ်ထားပါ။ ၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ADD - ၄၆ ဒန်ကန်ကုန်းလမ်း၊ Chengdong၊ Huai 'An District၊ Huai' An City, Jiangsu Province, China